Farmaajo “Waxaan aad ugu kalsoonahay taageerada ay ii muujiyeen xildhibaanada labada Aqal..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo “Waxaan aad ugu kalsoonahay taageerada ay ii muujiyeen xildhibaanada labada Aqal..”
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG ahayd ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa markii ugu horeeysay shaaca ka qaaday inuu haysto taageero ku filan islamarkaana uu rajeeynayo inuu ku guuleysto doorashada.
Musharax Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in isbadel buuxo uu ku yimaado hogaanka sare ee dalka, isagoona dhinaca kale si weyn u ammaanay taageeradda ay muujiyeen xildhibaanada isbadel doonka ah ee labada Aqal.
“Waxaan aad ugu kalsoonahay taageerada ay ii muujiyeen xildhibaanada labada Aqal, waxaana rajeynayaa in berri uu dhaco isbadel dhab ah” ayuu yiri Musharax Maxamed C/llaahi Farmaajo oo qoraalkan soo dhigay bartiisa twitter-ka.
Sidoo kale, waxaa saacadihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho hareeyay ololaha ay kala wadaan musharixiinta u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana saacadihii ugu dambeysay magaalada laga dareemayay dhoolatus ay sameynayaan qaar ka mid ah musharixiinta.
Musharixiinta dhoolatuska maanta sameeyay ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha xilka kasii dagaya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo Hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho ku casuumay in ka badan 200 oo xildhibaano.#
Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la filayaa in saacadaha soo socdo uu shir jaraa’id ku qabto guriga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay.
Sheekh Shariif ayaa shirkiisa jaraa’id kaga hadli doonno xaaladda doorashada iyo rajadiisa ku saabsan in dib loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya oo uu tartan weyn kula jiro musharixiin aad u culus.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, iyadoona xilliga ay dhaceeyso doorashada ay ka harsan tahay in ka yar 24 saacadood oo kaliya.